Soo-saareyaasha Cuntada Badeecada Raw Tamoxifen & Shirkadaha - Warshadaha
Tamoxifen budada Citrate waa unug aan horay u lahayn oo leh hanti farsamo oo awood leh. Anti-estrogens waxay shaqeyneysaa iyadoo xannibaysa saameynta hormoonka hormoonka ee jirka. Estrogen wuxuu sababi karaa koritaanka noocyada qaar ee burooyinka naaska. Tamoxifen waxay xannibi kartaa koritaanka burooyinka ee ka jawaab celiya estrogen.
Raw Tamoxifen Citrate (54965-24-1) video
Raw Tamoxifen Citrate (54965-24-1) Sharaxaad
Raw Tamoxifen budada Citrate ayaa ah milixda citrate of antineoplastic nonsteroidal xayawaanka unugyada hormoonka estrogen xajinta (SERM). Tamoxifen ayaa si tartiib tartiib ah u xakameysa xayndaabta estradiol-ga xayaysiinta estrogen, taasina waxay ka hortagtaa in qofku qaato wax ka qabashada xubinta taranka ee DNA-ga. Natiijadu waa hoos u dhaca DNA-ga iyo jawaab-celin-celinta ee estrogen. Intaa ka sokow, tamoxifen waxay kor u qaadeysaa wax soo saarka kobcinta isbeddelka B (TGFb), taas oo keeneysa kororka unugyada unugyada kansarka, hoosna u xakameynaya saameynta kiniinka insulin-sida 1 (IGF-1), taas oo keenaysa kobaca kansarka naasaha . Tamoxifen waxay sidoo kale hoos u dhigtaa qiyaasaha protein kinase C (PKC) ee habka ku-salaysan, daaweynta isdhexgalka sinaanta iyo soo saarida saameyn antipolliferative ah burooyinka sida malignant glioma iyo kansarrada kale ee aad u fara badan PKC.
Raw Tamoxifen Isticmaalka budada Citrate ee loo isticmaalo daaweynta iyo kahortagga kansarka naasaha ee xasaasiyadeed ee estrogen. Tamoxifen wuxuu u dhaqmaa sidii anti-ootrogen (ka hortagga uur-maskaxda) ee nudaha naasaha, laakiin sida estrogen (wakiilka kicinta) ee metabolism kolesteroolka, cufnaanta lafaha, iyo kordhinta unugyada endometrium.
Raw Tamoxifen Citrate (54965-24-1) Smamnuucista
Product Name Raw Tamoxifen budada Citrate
Magaca Kiimikada Istubal; Tamoxifen,
Fasalka Daroogada Modulator (SFM) ee xulafada leh ee loo yaqaan 'estrogen receptor'
Molecular Wsideed 563.647 g / mol
barafku Psaliid 97 ° C
Biological Life-Life Isku-dhafka xajmiga faytamka ee tamoxifen waa maadad la socota qaybta dhimista terminaalka ee ku dhowaad 5 ilaa maalmaha 7. Qiyaasta nuska N-desmethyl tamoxifen waa maalmo 14.
Color Baraf cad ama madmadow
milmi xaddiga biyaha 0.000167 mg / mL at 25 ° C
kaydinta Temperature 2-8 ° C
Application Isticmaalida daaweynta iyo ka hortagga kansarka naasaha ee xasaasiyadeed ee estrogen.
waa maxay Raw Tamoxifen budada Citrate (54965-24-1)?
Tamoxifen waa nooca daaweynta hoormoonka oo loo yaqaan 'modulator' (samaynta hormoonka xajmiga hormoonka ah) (SERM). Mid ka mid ah magacyada calaamadaha tamoxifen waa Nolvadex.
Sida Raw Tamoxifen Citrate (54965-24-1) shuqullada
Tamoxifen wuxuu u shaqeeyaa adoo ku xiraya qashinka xayawaanka ee ku jira unugyada naaska si ay estrogen ugu xidhnaadaan iyaga. Ka hortagidda estrogen ee naasaha ee ku xiran receptors, tamoxifen wuxuu yareeyaa kobaca iyo dhalmo ee unugyada kansarka naasaha-xasaasiga ah.
Tamoxifen budada Citrate ayaa ah cusbada citrate ee antineoplastic nonsteroidal nonsteroidal xayawaanka xajmiga daaweynta estrogen (SERM). Tamoxifen ayaa si tartiib tartiib ah u xakameysa xayndaabta estradiol-ga xayaysiinta estrogen, taasina waxay ka hortagtaa in qofku qaato wax ka qabashada xubinta taranka ee DNA-ga. Natiijadu waa hoos u dhaca DNA-ga iyo jawaab-celin-celinta ee estrogen. Intaa ka sokow, tamoxifen waxay kor u qaadeysaa wax soo saarka kobcinta isbeddelka B (TGFb), taas oo keeneysa kororka unugyada unugyada kansarka, hoosna u xakameynaya saameynta kiniinka insulin-sida 1 (IGF-1), taas oo keenaysa kobaca kansarka naasaha . Tamoxifen waxay sidoo kale hoos u dhigtaa qiyaasaha protein kinase C (PKC) ee habka ku-tiirsan, habka is-beddelidda sinaanta iyo soo saarida saameyn antipolliferative ah burooyinka sida malignant glioma iyo kansarrada kale ee aad u fara badan PKC.
Akhri Tilmaamaha Daweynta ee uu bixiyay farmashiistahaaga ka hor intaadan bilaabin isticmaalka tamoxifen iyo mar kasta oo aad hesho buuxinta. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, la tasho dhakhtarkaaga ama farmashiistaha.
Qaadashada daawadan adoo isticmaalaya cunto la'aan ama cunto la'aan, badanaa mar ama laba jeer maalin walba 5, ama sida uu dhakhtarku kuu sheegay. Qiyaasta maalinlaha ah ee ka weyn millatariga 20 ayaa badiyaa loo qaybiyaa nusana waxaa la qaataa laba jeer maalintii, subaxa iyo fiidkii, ama sida uu dhakhtarku kuu sheegay. Haddii aad isticmaashid dareeraha, cabir qiyaasta si taxadar leh adigoo isticmaalaya qalab qiyaas ah / qaado. Ha isticmaalin qaaddo qoyan sababtoo ah ma heli kartid qiyaasta saxda ah.
Qiyaasta waxay ku saleysan tahay xaaladdaada caafimaad iyo jawaabta daaweynta.
Raw Tamoxifen Citrate (54965-24-1) faa'iidooyinka
Tamoxifen waa doorashada koowaad ee haweenka premenopausal waxayna wali tahay door wanaagsan oo loogu talagalay dumarka postmenopausal kuwaas oo aan qaadan karin aromatase inhibitor ah.
Iska yaree halista kansarka naasaha ee soo noqnoqda 40% ilaa 50% dumarka postmenopausal iyo 30% ee 50% ee dumarka horay u dhalatay
Yaree halista kansarka cusub ee naas kale ku sameysma oo ku saabsan 50%
Iska ilaali kansarka naasaha waaweyn, hormoonka-hormoonka-naasaha ka hor qaliinka
Si tartiib ah ama u joojiso koritaanka ama kansarka naas-nuujinta ee hormoon-hormoonka-hormarka ah ee haweenka ka hor iyo dumarka ka hor
Halista kansarka naasaha ee dumarka leh khatarta caadiga ah ee cudurka laakiin aan la helin
Tamoxifen waxay bixisaa faa'iidooyin caafimaad oo kale oo aan la xiriirin daaweynta kansarka. Sababtoo ah waa SERM, waxay xushmeyneysaa labada dhinac ama waxay kicineysaa ficilka estrogen ee unugyada gaarka ah. Inkasta oo tamoxifenku xaddiddo tallaalka estrogen ee unugyada naasaha, waxay kicisaa ficilka estrogen ee lafaha iyo unugyada beerka. Sidaa darteed tamoxifen waxay:
caawinta joojinta lafta laf-dhabarka ka dib marka caado-ba'an
heerka hoose ee kolesteroolka
Soo iibso Tamoksifen Citrate laga bilaabo Buyaas.com
Hagaha Ultimate ee Nolvadex si loo daaweeyo kansarka naasaha
Tamoxifen: Beyond Kontoroolaji, John A. Kellen, bogga 1-201
Tamoxifen, Dr. Titus Marcus, oo si madaxbanaan loo daabacay, 29thMaarso 2019, 1-18
Dareeraha Root Latrozole (112809-51-5)